Ọkachamara Semalt: Gịnị mere na otu esi eji Amazon rụọ ọrụ E-Commerce Brand?
Ahịa Amazon na-eje ozi dị ka ikpo okwu ebe ndị mmadụ na-amalite ụdị na-amụtabanyere àgwà ndị ahịa. Ọ na-enyere aka n'ịkwalite ndị na-achụ nta ego. Ahịaebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma ma e jiri ya tụnyere ọkọlọtọ ahịa - set of 3 bar stools for sale. Iji ahịa ahịa dị ka ebe ọzọ isi enweta ego bụ uru bara uru.
Artem Abgarian, onye isi ahịa ndị na-azụ ahịa nke Ọkachamara ,kọwakwuo iji Amazon mee ka e nwee ụlọ ahịa e-azụmahịa na-aga nke ọma.
Tupu ịmara na ike ahịa dị n'ahịa ahụ, ọ dị mma ịmalite naisi. Amazon nyere aka n'ịzụ ahịa ndị ahịa. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na mmadụ amara otú o si arụ ọrụ, naanị mgbe ahụ ka ha ga-ejide yaike iji Amazon na-eto eto.
Ama Amazon gbasara pasent 50 na ọchụchọ. Na nkeji nke anọ nke 2016,Ọ bụ Amazon kpatara pasent 60 nke azụmahịa niile e-azụ ahịa. N'ikpeazụ, ihe ka ukwuu n'ime ihe ndị e rere n'elu ikpo okwu si n'aka ndị ọzọndị na-ere ákwà.
Ihe ndị a na-egosi na ọtụtụ ndị ahịa na-agakarị Amazon iji chọọngwaahịa. Ya mere, iji ya mee ihe maka mmata na ndị ahịa ga-enyere aka ahịa ahụ na-eleba anya na ngwaahịa na ahịa na gburugburuechiche banyere isi ebe ọ nwere ike ịlụ ọgụ na ndị asọmpi kacha elu.
Iji Amazon, ọ bụ megide nduzi ịzụ ahịa maka ndị ahịa.Ka o sina dị, Amazon na-enye ohere ịzụ ahịa iji mezie omume ịzụ ahịa ha gaa na ebe ha chọrọ ịga na ebe nrụọrụ weebụ ụlọ ọrụ. Ọmụmaatụ,onye ahịa nwere ike ịzụta otu ngwaahịa site na ụlọ ọrụ, ma ihe ndị na-agbanwe agbanwe dị na ebe nrụọrụ weebụ ha..
Mgbasa ozi Amazon na-achọpụta
Mgbasa ozi mgbasa ozi na Amazon yiri nke AdWords ebe ọ bụ na ha dabere na isiokwu. Nkwadomgbasa ozi dị mkpa ebe ọ bụ na onye na-azụ ahịa nwere ike iji ha mee ka ụlọ ọrụ ndị na-emeso otu ngwaahịa ahụ kwụsị. Ọnụ ego nke ịpị bụ ihe na-erughịachọta ego.
Amazon na SEO uru
Ozugbo azụmahịa malitere ịmalite ịrị elu na ahịa, enwere nnukwu oherengwaahịa ha ga - amalite igosi n'elu n'elu ogo ọchụchọ Amazon. N'ihi ya, Google ga-ebuli àgwà ndị a dị elu. Iji ngwaahịaederede dị ka ngwá ọrụ mbụ maka nyocha nke ụlọ na Google ga-eduzi ndị ahịa na ngwaahịa ndị ụlọ ọrụ ahụ.
Site na nyocha ọchụchọ, ma na-azụ ndị ahịa n'aka Amazon, ndị na-azụ ahịa ga-achọpụta naNgwa ụlọ ọrụ na-apụta na ọtụtụ saịtị. Ọ na-akwalite inwe mmetụta nke ntụkwasị obi na ndị na-azụ ahịa. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ na-ere ngwaahịa ya n'ụzọ ziri ezi,ha ga-ejide n'aka inye ezi nyocha. Igwe nyocha na-aputa otutu ndi ahia.
E nwere ọtụtụ nchegbu ndị ahịa nwere tupu ha na Amazon:
Echiche Ụgha nke 1:
Amazon na-agbanye akara ahụ n'enweghị ihe kpatara ya. Ọ bụghị eziokwu dịka ntọala nke ikana-adabere na ndị ọzọ ma ọ bụrụhaala na otu na-arụ ọrụ n'ime ntụziaka Amazon.
Echiche Ụgha nke 2:
Amazon na-azụ ahịa ozugbo ọ na-apụ. Ndị ọrụ Amazon naanị jụrụ ndị mmadụ ịhọrọn'etiti onye na-ere ahịa ma ọ bụ onye na-ere ihe, ma mkpebi ahụ zuru oke nye onye ahụ.
Echiche Ụgha nke 3:
Amazon dị iche na ụlọ ahịa e-commerce nkịtị. Ọ bụ ụlọ ahịa e-azụmahịaa na-achọta ihe a na-achọta ma na-ese okwu-dị ka Google.
Ịzụta na Amazon bụ atụmatụ dabeere na mkpebi na itinye mgbalị nke ọma.Ọtụtụ ederede dị na Amazon maka azụmahịa iji ree ma nweta ndị ahịa. Onye nwe ya kpebiri ụzọ kachasị mma maka ha.